Rome nwere akwa mmiri ohuru: oru ngo a na-emezughị nke Michelangelo ugbu a Emechara
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Europe » Rome nwere akwa mmiri ohuru: oru ngo a na-emezughị nke Michelangelo ugbu a Emechara
Na -agbasa Akụkọ Europe • Editorial • Education • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • Iwughachi • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Rome nwere akwa mmiri, ma ọ bụ karịa akụkụ ya, nke ọtụtụ narị ndị ọrụ afọ ofufo wuru n'oge ndekọ. Nke a bụ Ponte Farnese, ọrụ nke na-eweghachi ọrụ Michelangelo a na-emezughị na isi ihe na-eme ka ọ ghara ịdị na-arụ ọrụ nke na ọ nwere ike ise n'elu ikuku.
Àkwà mmiri ahụ, nke dị mita iri na asatọ n’ogologo, bụ nke kaadiboodu siri ike ma jiri balloons atọ buru ibu kwụsịtụrụ.
Nke a bụ nsonaazụ nke ọgụgụ isi nke onye omenkà France Olivier Grossetete na ntinye nke ndị nnọchi anya French yana Institut Francais Italia.
Otu Webuild kwadoro oru a na mmekorita ya na Villa Farnesina-Accademia dei Lincei.
The Ponte Farnese, aha ya bụ "Ponte tra le Epoche," (Bridge n'etiti Epoch) ka e hiwere na mgbede nke July 13, 2021, na ibuli ọrụ ahụ na mgbatị nke Tiber n'akụkụ Ponte Sisto. Ọ ga-anọ na-akwụsịtụ n'ogologo nke mita 18 ruo na July 18, mgbe a ga-ewepụ ya na kaadiboodu eji eme ihe - a ga-emezigharị ya niile.
Emere ihe owuwu n'ụdị ụlọ ọrụ "na-efe efe" na ebe obibi nwere oghere maka ndị nọ n'afọ ndụ niile yana ntuziaka nke onye omenka French na ọnụnọ ndị otu ya.
Grossetète abụghị ihe ọhụrụ n'ụdị ụdị ụlọ a. Ha etinyela ụdị ọrụ ahụ na France, Spain, China, na Russia.